कञ्चनपुरमा सिँचाइको व्यवस्थाले बुहारी भित्र्याउन सहज :: Setopati
बिहिबार, असोज ८, २०७७
कञ्चनपुरमा सिँचाइको व्यवस्थाले बुहारी भित्र्याउन सहज
रासस कञ्चनपुर, माघ २६
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–७ चुरे क्षेत्र नजिक खेतमा सिँचाइको व्यवस्था भएपछि बिहेवारी गर्न सहज भएको छ।
सिँचाइ नहुँदा थोरै मात्रै उब्जनी हुन्थ्यो। थोरै अन्नले परिवारको वर्षभरिको साँझ–बिहानको छाक टार्न निकै मुस्किल हुन्थ्यो। अन्नले छ महिना धान्न नसकेपछि यहाँका अधिकांश बासिन्दा भारतमा मजदुरीमा जान बाध्यता थियो।
'सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा बुहारी भित्र्याउन यहाँका बासिन्दालाई सहज थिएन,' वडाध्यक्ष शङ्करसिंह कुवँरले भने, 'बुहारी खोज्न जाँदा सिँचाइको व्यवस्था भए/नभएको यकिन गर्दथे। अन्न थोरै उत्पादन हुँदा बुहारी पाउन विगतमा निकै अप्ठ्यारो नै थियो।'
खानेपानी टाढाबाट बोकेर ल्याउनु पर्दथ्यो। यही समस्यालाई मध्यजनर गर्दै गाउँपालिकामा निर्वाचित पछि पहिलो प्राथमिकतामा सिँचाइलाई राखेको अध्यक्ष कुवँरले बताए। 'स्थानीय बासिन्दाका खेतमा हाल सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। उनीहरुलाई वर्षभरि खान पुग्ने भएको छ। उत्पादन बढेको छ,' उनले भने।
खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थाले बुहारी भित्र्याउन विगतको जस्तो स्थानीय बासिन्दाले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाको नभएको वडाध्यक्ष कुवँरले बताए। सिँचाइको व्यवस्थाले स्थानीय बासिन्दा व्यावसायिक केराखेती र तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। आम्दानी तीन गुणाले बढेको छ। घरमै बसीबसी कमाई गर्न थालेका छन्।
स्थानीय दानी गिरीले सिँचाइ र खानेपानीको अभाव नभएको बताइन्। 'खानेपानीका लागि पनि सास्ती खेप्नु पर्दथ्यो। पहाडबाट तराई झर्दा सुखको अनुभूति गरी आएका थियौँ। यहाँ आएपछि निकै कष्ट सह्यौँ,' उनले भनिन्, हाल जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि खानेपानीसँगै खेतमा सिँचाइको सुविधा पुगेको छ।'
चुरे क्षेत्र नजिकको बासिन्दा भनेपछि कसैले पनि छोरी दिन मान्दैनथे। हाल सडक, सिँचाइ, खानेपानीको व्यवस्था भएपछि बुहारी ल्याउन विगतको जस्तो भएको उनले बताइन्। गिरीका अनुसार नजिकैको चुरे क्षेत्रमा रहेको धार्मिक क्षेत्रमा समेत सडकसहितका पूर्वाधार विकास हुन थालेको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाले समेत चुरे क्षेत्रका बासिन्दालाई छोएको छैन। आव २०७६/७७ मा सिँचाइ र खानेपानीको आपूर्तिलाई निरन्तर गर्नका लागि वडा कार्यालयले १०० केभीका दुई ट्रान्सफर्मर जडानसँगै सिँचाइ कुलो मर्मत, पक्की कुलो निर्माण, भूमिगत सिँचाइ मर्मतसम्भारको काम गरेको छ।
आव २०७४/७५ र आव २०७५/७६ को असार मसान्तसम्ममा वडा कार्यालयले बैजनाथ, पशुपति, राधाकृष्ण, ज्योति, केदार, शिवशक्ति, दुर्गा, श्रीकृष्ण, अस्मिकेदार, सिद्धनाथ, भूमिराज लगायत टोलमा झण्डै रु एक करोड बढीको लगानीमा डिप ट्युबेल, स्योलो ट्युबेल जडानसँगै समरसिल पम्प खरीद, पाइप खरीदलगायतका काम सम्पन्न गरेको छ।
डेढ दर्जन बढी डिप ट्युबेल सिँचाइ सुविधाका लागि निर्माण गरी स्थानीय किसानको खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको वडाध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिए। कुवँरका अनुसार निर्माण गरिएको एक डिपट्युबेलबाट ६० बिघा जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ।
डिपट्युबेल र स्यालोट्युबेलबाट झण्डै ८०० बिघा खेतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। वडामा एक हजार ८४ परिवारको बसोबास छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, माघ २६, २०७६
कोरोनाविरुद्ध विश्वले लगाउँदैछ नेपालीले बनाएका पन्जा
नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरू आफ्ना सेना लिएर हुम्लाको सीमामा पुगेपछि...
दुबईबाट विश्वलाई आइपिएल देखाउने हर्क कैनी
भेन्टिलेटर अभाव भएपछि सप्तरीका कोरोना संक्रमित मेयर काठमाडौं रिफर
तातोमा पनि बाँच्ने, टुक्रा पार्दा आफैं जोडिने ज्याद्रो भाइरस !
इन्टरनेटमा सुरक्षित हुने उपाय खोज्थिन्, आफैं 'ह्याकर' बनिन्
‘छोरीहरू फाइट गर्न सक्छन् रे, ऊ पनि बाँच्ली कि!’
राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि सरकारी ढुकुटीमा भरियो ३० अर्ब
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड अवरुद्ध
महाराष्ट्रमा भवन भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या ३९ पुग्यो
मल नल्याउने शैलुङ र होनिको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न बाटो खुला
बोनिताले जितिन् दस हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार
कृषि विकासमा स्थानीय तहको नेतृत्व सुशील पोखरेल
स्वतन्त्रता कति प्यारो! तेज काफ्ले
बेरोजगार जागिरे धर्मराज भट्टराई
मनमती पारु भण्डारी
मगमगाओस् तिम्रो जीवन यशोदा गौतम
लाटो क्रान्तिकारी लोकेन्द्र भण्डारी
फूलबारी आयुष्मा तिवारी
मेरो यात्रा अनुभव आयुष सुवेदी
किताब पढेपछि लगबुक राख्नू है सुप्रभ आचार्य